China Ukubaluleka kwetyuwa kunye nepepper Grinder abavelisi kunye nabathengisi | Nciphisa
Ubomi buphila, ukutya nokusela ngamagama amabini, ukujonga imbali yophuhliso lomntu, ngaphandle kokutya, abantu abanakuphila kwaye bavelise kwakhona. Ke ngoko, ukutya esikuthatha ngokungakhathali ngokwenene "kukhulu"! Ukusuka kubantu bakudala abasela igazi ukuya ekufumaneni umlilo wokuvalelisa ukutya okuluhlaza, abantu inyathelo nenyathelo basebenzisa ubulumko "bokutya ukutya" ukwanelisa ukuhlukunyezwa kwamadlakudla, iindlela ezininzi zokupheka ziye zavela, kwaye kwaveliswa izixhobo ezahlukeneyo kwavela. Umgrayo yenye yazo.
Ukushwankathela, ukugaya yinto yokusebenza kweyunithi eguqula izinto eziqinileyo zibe ziincinci ezincinci. E-China, ukugaya kokuqala kwakungasetyenziswanga iinkozo kuphela kodwa kwakusetyenziselwa izinto zonyango, kodwa isicelo ekutyeni sasise "buthathaka." Yipelepele.
Ngapha koko, ayisiyiyo kuphela ixabiso elibizayo, ipepile ngokwayo nayo yonakele kakhulu. Ukuvumba kwayo kuya kulahleka ngokunyanzeliswa kwezinto zamachiza, ngoko ukugcinwa okutywinwe kunceda ukugcina ipepper livumba ixesha elide. Kwangelo xesha, ipepile iya kuphulukana nephunga layo phantsi kwemitha yokukhanya. Emva kokugutywa kube ngumgubo, ivumba leepepile liza kutsha ngokukhawuleza, ngakumbi ubushushu obuveliswe ngumatshini wokugaya buya kuyomeleza inkqubo yevumba lentlungu. Ngumhlaba omtsha kuphela onokuthi uqinisekise ukuba ivumba elikhethekileyo lepepile alinakuphuma okanye liphulukane. Xa upheka, ubambe into yokugaya ipepile ukusila kunye nokutyumza iinkozo zepepile kwaye ufefe umphezulu wokutya yeyona ndlela ilungileyo yokwandisa ivumba lepepile emnyama.
Kukho izinto ezimbini zokuguba kumagumbi okutyela nasekuphekeni: enye yeyetyuwa enye ipepile, ezifanelekileyo ukutya kwamaTshayina nawaseNtshona. I-grinder okanye i-salt grinder kunye ne-pepper grinder.
Okwangoku, uninzi lwee-cores grinder cores kwimarike zenziwe ngentsimbi engenasici, enokuthi ibonakale ngexesha lokugaya ityuwa. Ukuthintela le meko, sikhethe ii-cores zokugaya ze-ceramic, ezingenabungozi, ezingangcolisiyo, ezingenayo i-oxidizing kunye ne-non-corrosive. Ubunzima bokumelana nokunxiba okuphezulu kukwesibini kuphela kwidayimani, kwaye ipropathi eyahlukileyo engeyiyo yentsimbi ayivelisi pores kwaye ichasa ngokufanelekileyo ukukhula kweentsholongwane; ukuqhuba kwayo kwe-thermal kuphantsi kakhulu kunentsimbi, kwaye ubushushu buncinci ukugcina ivumba; umbala umhlophe kwaye ujikeleze, ngombala wejade, ukongeza isidima ukonwabela.
Egqithileyo Isikhokelo seSpice seTyuwa yePepper enamaxesha ahlukeneyo
Okulandelayo: Ukuphuculwa okutsha okuphathwayo kombane wekhofi
Isitshisi se Pepper sombane
Isitshisi se Pepper